Guinea: Miriam Makeba's Dalada, "Mama Africa" ​​- JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » kambani »Guinea: muMalaam Makeba's Dalada," Mama Africa "- JeuneAfrique.com
Guinea: muMalaam Makeba's Dalada, "Mama Africa" ​​- JeuneAfrique.com
Zviri muDalaba kuti Miriam Makeba akasarudza kugara, panguva yakareba yekutapwa muGuinea, kubva ku1969 kusvika ku1985.
Guinea: gore rebhadha rese
Kiyi ichi ichiri kupenya, musuo uri kunyangarika. Tibou Bah, mutariri wetemberi, anofambira mberi achinyatsocherechedza mumakore gumi namashanu mumusha weMiriam Makeba muDalaba. "Pano paiva kubika kwake. Aifarira miriwo kubva mubindu. Akagamuchira zvakawanda, "anogomera. Pakati pevakashanyira vakawanda vaiva vaongorori, vanoita zvematongerwo enyika uye vezvematongerwe enyika, zvakadai Kwame Nkrumah uye, kupfuura zvose, Mutungamiriri we Guinean Sékou Touré, uyo akavakira imba uye akamupa Guinean nyika.
Zvematongerwe enyika kushingaira
Pakati peimba, denderedzwa yeimba yekurara, yakarara. © photo: F.-X. Freland for JA
Isu tinopinda muchitenderedzwa chakanaka chekugara, chakagadzirwa nefurafura huru yemapuranga uye zvigadziko zvitsvuku zvevelvet. Pasi pedenga rakasvibirira, masvingo ane grey pende uye yakavezwa majeti geometric akaiswa pfuti
Colorado mukuru mukuru anorayira kusarudza kwake